DF oo aan wali meel ku sheegin ciidankii loo qaaday Eritrea | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaan wali xal loo hilin cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, si qarsoodi ah caruurtoodii u geysay dalka Eritrea, waxayna si joogto ah u dalbanayaan in loo sheego halka ay ku sugan yihiin caruurtooda raq iyo ruuxba.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore ayuu soo ifbaxay war ah in dhalinyaro Soomaaliyeed oo Dowladdu tababar ugu qaaday dalka Eritrea loo daabulay gudaha Itoobiya si ay uga qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah Urur-ka TPLF.
Inkastoo Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe, beeniyay warkaan, uuna ku raacay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Danjire Dina Mufti, hadana waxa ay Dowladda Somaaliya ku fashilantay in ay la timaado caddeyn rasmi ah oo la xariirta nolosha dhalinyarada maqan.
Bilowgii bishaan waxaa soo baxay in ku dhawaad 80 dhalinyaro ah ay ka soo baxsadeen xero tababar oo ku talla Eritrea, kuwaas oo intooda badan gacanta u galay xoolo dhaqato Canfar ah oo Madax furasho u heysta, waana sababta keentay in maamooyinka Soomaaliyeed si joogto ugu hor bannaan baxaan xarumaha Dowladda, todobaadkaan oo dhan.
Madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki, ayay ilo loo qaateen ah sheegayaan inuu diiday in la soo qaado ciidamo aan badbeyn oo hadda ku sugan Eritrea, wuxuuna dalbaday in la bixiyo lacagihii ku baxay dhalinyarada intii uu tababarku socday, lacagtaas waxaa hore u balan qaaday dalka Qatar.
Sannadkii 2019, heshiis qarsoodi ah ayaa dhex maray Madaxda Ereteriya, Itoobiya & Soomaaliya, waxaana lagu heshiiyay sameynta ciidan qarsoodi ah, oo u faran in ay ka howlgalaan Saddexda waddan, si loo xakameeyo caqabadaha ay wajahayaan, Colaadda Tigray ayaa ahayd kiiska koobaad ee lagu tijaabinayay ciidankaan.
Qaar ka mid ah waalidiinta ayaa lagu wargaliyay geerida caruurtooda, laakiin wax sharaxaad ah lama siinin. Kuwa kale, waxaa loo oggolaaday inay la hadlaan carruurtooda daqiiqado yar, halka qaar kalana aan dhag qalaq loo siin.
Markii la weydiiyay taliyaha ugu sareeya ciidamada XDS, Odawaa Yuusuf Raage, nooca ay yihiin ciidamada loo diray Eritrea, wuxuu sheegay inuusan ka warqabin wax ciidan ah oo loo diray dalkaas.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, wuxuu kamid ahaa shaqsiyaadka faro ku tiriska ah ee wax ka ogaa diridda ciidankaan, waxaana todobaadkan si weyn looga codsay inuu hadlo, hor yimaado hooyooyinka oynaya, inu sheego inta uu ka ogyahay dhalinyaradaan maqan.
Taliyaha NISA, Fahad Yaasiin, ayaa la rumeysan yahay inuu ka danbeeyay qaadidda ciidankaan, mana jirto cid su’aal ka weydiisay tan iyo markii uu soo if-baxay warka dhiillada leh ee la xariira dhalinyarada Soomaaliyeed.